သင်းအုပ်ဆိုင်ရာသင်တန်း (Pastoral Training) – MBC
ဒုတိယအကြိမ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သာသနာ့လုပ်ငန်း ဆွေးနွေးပွဲ
ဇူလိုင် 3, 2019
သင်္ဘောသားများမိတ်သဟာရ “ The Day of Seafarer”
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များဌာနမှ ဦးဆောင်၍ “ သင်းအုပ်ဆိုင်ရာသင်တန်း (Pastoral Training)” ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂-၂၆)ရက် တွင် MBC HOLTI ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ တက်ရောက်သူစုစုပေါင်း (၂၁)ဦး ရှိပါသည်။
၁) အလုပ်အစည်းအဝေး အုပ်ချုပ်ပုံ နှင့် နည်းစနစ်များ – Rev. ဦးသာဒင်
၂) သင်းအုပ်အမှုတော်ဆောင်များ ဝိညာဉ်ရေး ရင့်ကျက်မှု – Rev. Dr. ဇော်ဝင်း
၃) တရားဒေသနာ ဟောကြားခြင်းနှင့် တရားဟောချက် ပြင်ဆင်ခြင်း – Rev. Dr. Van Bik
၄) ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင် သင်းအုပ်ဆရာ၏အခန်းကဏ္ဍ – Rev. Dr. ခင်ဆွေဦး
၅) အသင်းတော်စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် အုပ်ချုပ်စီမံခြင်း – Rev. Dr. Smith Ngulh Za Thawng
၁) ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်နှင့် ဘဏ္ဍာပစ္စည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု Financial Management
၂) ၂၁ ရာစု နှစ်ခြင်းသင်းအုပ်များ၏အခန်းကဏ္ဍ
Rev. Dr. ချိုဟုန်းအွမ်ငိုင်း
၃) ဝိညာဉ်တော် ဦးဆောင်သော ခေါင်းဆောင်မှု Spirit-Lead Leadership
Rev. Dr. စောအယ်သော
၄) Integral Mission
Rev. Dr. တင်ထွန်းဝင်း
တို့ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ် နံနက် (၈း၀၀)နာရီတွင် ဝတ်ပြုခြင်းဖြင့် အစပြုပြီး ၉း၀၀-၁၀း၃၀ နာရီတွင် သင်ခန်းစာ၊ ၁၀း၃၀-၁၀း၄၅ နာရီအထိ ခေတ္တအနားယူချိန်၊ ၁၀း၄၅-၁၂း၀၀ နာရီတွင် သင်ခန်းစာအချိန်၊ မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ မှ မွန်းလွဲ ၁း၁၀၀ နာရီတွင် နေ့လည်စာ၊ ၁း၀၀ – ၂း၃၀ နာရီအထိ သင်ခန်းစာ၊ ၂း၃၀-၂း၄၅ နာရီတွင် ခေတ္တအနားယူချိန်၊ ၂း၄၅-၄း၀၀နာရီ အထိ သင်ခန်းစာအချိန်ဖြစ်ပြီး ညနေ ၅း၀၀ နာရီတွင် ညနေစာဖြစ်ပါသည်။ စနေနေ့များတွင် အသင်းတော်များသို့ သွားရောက် လေ့လာခြင်း နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် အသင်းတော်များသို့ မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့် သွားရောက် ပါဝင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကို ဇူလိုင်လ (၂)ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၈း၀၀-၉း၀၀ နာရီတွင် ပြုလုပ်ရာ သဘာပတိအဖြစ် တွဲဖက် ဌာန တာဝန်ခံ ဆရာဗန်ဒေါ့လျန်၊ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြားခြင်းနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်းကို ဌာနတာဝန်ခံ Rev. Dr. စောအယ်သော၊ တိုက်တွ်နး ခွန်အားပေးခြင်းကို အသင်းချုပ် တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး Rev. Dr. ရောဘတ်ပွန်း၊ အထူး ဆက်ကပ် ဆုတောင်းခြင်း နှင့် ကောင်းကြီးပေးခြင်းကို ဌာနသဘာပတိ Rev. ဦးဇော်မိုင် တို့က ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။